नागरिक लकडाउनमा, जनप्रतिनिधि नदी दोहनमा !
विनोद विष्ट काभ्रे
सागर चन्द काभ्रे
२०७७ जेठ २४ शनिबार ०४:४५:००
विनोद विष्ट, काभ्रे
सागर चन्द, काभ्रे
नयाँ पत्रिका स्थलगत रिपोर्ट : लकडाउनका वेला सडकमा पैदल हिँडेका यात्रुलाई प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको दृश्य देखिए, तर यही वेला संगठित रूपमा मान्छे जम्मा गरेर रात–दिन नदी दोहन गर्दा पनि प्रशासन मौन । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र सिन्धुलीबाट बनेपा हुँदै हरेक रात राजधानी भित्रन्छन् १५ सय टिपर ।
लकडाउनले दुनियाँभरका नदी कञ्चन भएका छन्, तर काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सीमा छुट्याउने इन्द्रावती नदीमा भने भेल बगिरहेको छ । लकडाउनको मौकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले डोजर चलाएर नदी दोहन गरिरहेका छन् ।
लकडाउनको वेला सडकमा पैदल हिँड्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले लाठीले कुटपिट गरेका दृश्य देखिए । तर, लकडाउनको अवहेलना गर्दै गाडी चलाउँदा, मान्छे जम्मा गरेर संक्रमणको जोखिम बढाउँदा र नदी दोहन गर्दा प्रशासन मौन बस्यो । स्थानीयले आवाज उठाउँदा क्रसर उद्योगीहरूले गुण्डा लगाएर जनतामाथि आक्रमण गरेको दोलालघाटका बासिन्दा बताउँछन् ।
गत माघमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि प्रशासनले काभ्रेका सबै क्रसर तथा बालुवाखानीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा ३१ वटै उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड नमानेको भेटिएपछि बन्द गर्न सिफारिस भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उत्खनन रोकिएको छैन । बर्खा महिनामा उत्खनन गर्दा बाढीको जोखिम बढाउने भएकाले यो समयमा खानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा प्रशासनलाई समेत वास्ता छैन ।
काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका– ९ मा रहेको त्रिवेणी क्रसर उद्योगका सञ्चालकले परिचालन गरेको समूह र स्थानीयबीच १ जेठमा झडप हुँदा दुईजना घाइते नै भए । तर, अनौठो विषय के छ भने जनतामाथि आक्रमण गराउने यो क्रसरमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य प्रेम लामा र सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको लगानी रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । लामा वडा नं. ९ बाटै निर्वाचित वडा सदस्यमा निर्वाचित भएर जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका हुन् ।
वडाध्यक्ष दलबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘बस्तीको बीचमा २२ रोपनी जग्गामा यो क्रसर चलेको छ । यसको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समिति सदस्य प्रेम लामाले गरेका छन् । प्रेमको सहायकको रूपमा भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल छन् । सुरुवातमा यिनीहरूले बालुवा धुने उद्योग भनेर अनुमति मागेका थिए । तर, अहिले त यिनीहरूले क्रसर नै चलाएका छन् ।’
‘लकडाउनमा पनि २४सैै घन्टा क्रसर उद्योग चलाएर नदी बर्बाद बनाए, प्रदूषण बढाए, वातावरण ध्वस्त बनाए भनेर आवाज उठाउँदा प्रशासनले सुनेन । हामी जनताले विरोध गर्दा बाहिरका मान्छे जम्मा गरेर हामीलाई तह लगाउन खोजे, खुकुरी बोेकेर हामीमाथि आक्रमण गरे,’ दोलालघाट सुधार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने ।
झडपमा घाइते भएका रामशरण पराजुली भन्छन्, ‘उनीहरूले पहिलेदेखि नै हामी गाउँलेलाई थर्काउने, धम्क्याउने गर्दै आएका थिए । २ जेठमा हामीले अहिले क्रसर नचलाऊ भनेपछि क्रसरमा सेयर भएको केदार पराजुली खुकुरी बोकेर हामी गाउँलेलाई काट्छौँ भन्दै आए । त्यसपछि हामी प्रतिकारमा उत्रिँदा मेरो टाउकोमा उसले खुकुरीले हानेको हो । हाम्रै गाउँमा पसेर हामीलाई खुकुरी हान्न थाले, जनप्रतिनिधिले नै गुण्डा परिचालन गरेपछि हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने ?’
स्थानीय जनतालाई खुकुरी हान्नेलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । बरु, सहमति गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी कार्यालयबाट खबर आएको बताउँछन् पराजुली । ‘ममाथि खुकुरी प्रहार भयो भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छेलाई अझै समातेको छैन । उल्टै लकडाउनपछि क्रसर सञ्चालकसँग बसेर सहमति गर्नुपर्छ भनेर मलाई प्रहरी चौकीबाट खबर आएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिकै लगानी रहेका क्रसर उद्योग लकडाउनको समयमा नदी दोहनमा झन् सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘दुनियाँलाई लकडाउन लाग्यो, तर यी क्रसर उद्योगीलाई दशैँ आएजस्तो भएको छ, अरू बेलाभन्दा झन् उग्र भएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
दुईजना जनप्रतिनिधिको लगानीमा सञ्चालित यो उद्योगले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रोडा–ढुंगा संकलन तथा क्रसर उद्योगको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ पनि पालना गरेको छैन । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग घना बस्तीबाट कम्तीमा पनि दुई किलोमिटर टाढा र नदी किनारबाट तीन सय मिटर टाढा हुनुपर्छ ।
तर, जनप्रतिनिधिको लगानीमा सञ्चालित त्रिवेणी क्रसर मापदण्डविपरीत बस्तीको मध्यभागमा सञ्चालित छ । इन्द्रावती नदीमै बालुवा पखाल्ने काम हुन्छ । नदीको बहाव नै परिवर्तन गरेर २४सै घन्टा नदीबाट बालुवा, ढुंगा निकाल्ने काम हुन्छ ।
यो उद्योगले दुई करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाइएको सिँचाइ नहरको नामोनिसान नै मेटाइदिएको बताउँछन वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष तामाङ ।
बागमती प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्दा साइड ड्रेन र हिलो थेग्ने पोखरी (सेटिङ पोन्ड)को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तर, काभ्रेको भुम्लु र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगले हिलो मिसिएको पानी कुलोसमेत नखनी इन्द्रावतीमा मिसाएका छन् ।
गाउँपालिका– १० का सदस्य तीर्थबहादुर लामाको लगानीमा भोटेकोसी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालित छ । बस्तीनजिकै रहेको यो उद्योगले पनि मापदण्ड पूरा गरेको छैन । २४सै घन्टा सञ्चालन हुने यी उद्योगले नदीसँगै वातावरण पनि प्रदूषित बनाएका छन् । ‘अचेल त हामीले सुत्दा पनि मास्क लगाउनुपर्ने भएको छ,’ स्थानीय बद्री थापा भन्छन्, ‘रातभरि चल्ने टिपर र क्रसरले उडाएको धुलोले हैरान गरिसक्यो ।’
क्रसर उद्योगको ठेक्का दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै ठेक्का लिने गरेका छन् । ‘जहाँसम्म बालुवा तथा रोडाको प्रसंग छ, त्यो स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो । धेरैले फागुनसम्म मात्र उत्खनन गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । कसैले अहिले पनि उत्खनन गरेका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ,’ काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण तिमिल्सिना भन्छन् ।
आफ्नो जिल्लामा चलेका क्रसरमध्ये मापदण्ड पूरा नगरे पनि कारबाही गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले सबै क्रसरको अनुगमनसमेत गरेर प्रतिवेदनसमेत पठाइसकेका छौँ । त्यसमा कसैले पनि पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यो काभ्रे मात्र होइन देशभरिकै समस्या हो । त्यसैले राष्ट्रव्यापी नीति बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
जहाँसम्म बालुवा तथा रोडाको प्रसंग छ, त्यो स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो । धेरैले फागुनसम्म मात्र उत्खनन गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । कसैले अहिले पनि उत्खनन गरेका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ ।
बालुवा र गिटी बोकेका टिपर रातभर चल्दा ध्वनि प्रदूषणले आफूहरू राम्रोसँग निदाउनसमेत नसकेको गुनासो गर्छन् स्थानीयवासी । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ११ को माझीबस्ती तीनतिरबाट क्रसर उद्योगले घेरिएको छ ।
‘रातको तीन खेप गर्छन् । दिनभर क्रसर चलाउँछन्, खोलामा गड्याङगुडुङ गर्छन्, सुत्नै सकिँदैन,’ माझीबस्तीका स्थानीय बलबहादुर माझी गुनासो गर्छन् ।
क्रसर र टिपरले उडाएको धुलोका कारण स्थानीयको तरकारी खेती पनि मासिएको छ । ‘यिनीहरूले उडाएको धुलोले तरकारी फल्दैन । लुगा धोएर सुकायो, धुलोले फेरि धुनुपर्ने हुन्छ । खान बस्यो खानामा धुलो भरिन्छ,’ बलबहादुर गुनासो गर्छन् ।
क्रसर उद्योगले इन्द्रावती नदी दोहन गरेकै कारण आफूहरूले माछा मार्ने पुख्र्यौली पेसासमेत त्याग्नुपरेको बताउँछन् रामकुमार माझी । उनी भन्छन्, ‘पानीमा डोजर चलाउन थालेदेखि माछा मार्न पनि छाडियो । ढुंगा, बालुवा, माटो सबै झिक्छन्, अनि माछा कहाँबाट भेट्नु ?’
नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिएको क्षेत्रमा क्रसर र वासिङ उद्योग सञ्चालित क्षेत्रमा वातावरण पुनस्र्थापनाका लागि वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । नियम पालना गरेर वृक्षरोपण गर्नु त परै जाओस् उल्टै धुलो उडेको गुनासो गर्दा क्रसर सञ्चालकले आफूहरूलाई धम्क्याउने गरेको सुनाउँछन् बलबहादुर माझी ।
बनेपा हुँदै हरेक रात १५ सय टिपर काठमाडौं छिर्छन्
अवैध क्रसरबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा, माटो ओसार्ने टिपरले सडकमा दादागिरी देखाउँछन् । दोलालघाटमा बद्री थापाले आफ्नो घरअगाडि रोकिराखेको गाडीलाई टिपरले ठोकिदियो । तर, प्रहरी, स्थानीय तह कसैले पनि टिपरलाई कारबाही गर्न चाहेनन् ।
दिउँसो दुर्घटना बढाएपछि सरकारले टिपरलाई राति मात्र चल्न दिने निर्णय ग¥यो । तर, दिउँसै क्रसर उद्योगबाट निर्माण सामग्री लोड गरेर निस्केपछि टिपरहरू सडक नै कब्जा गरेर सडकमा रोकिन्छन् ।
काभ्रेको दोलालघाट क्षेत्रमा इन्द्रावती नदीमा भइरहेको दोहन । गिटी तथा बालुवा बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेका टिपर । तस्बिरहरू : विनोद विष्ट
घरको ढोका छेकेर, सडक जाम गरेर लस्करै सडकमा रोकिन्छन्, हर्न बजाउँछन्, हल्ला गर्छन्, चालकहरू जथाभावी बोल्छन्, आफ्नै घरमा बसिनसक्नु भयो, कसलाई भन्ने हो ? सुनिदिने कोही छैन,’ स्थानीय भन्छन् ।
कार्यविधिअनुसार टिपरले प्रेसर हर्न बजाउन पाइँदैन । ४० किलोमिटर प्रतिघन्टाभन्दा बढी गतिमा दौडाउन पाइँदैन । पानी चुहाउन पाइँदैन । नदीजन्य पदार्थ लोड गरिएको सामग्री गन्तव्यमा नपुगन्जेल सडकमा पार्किङ गर्न पाइँदैन ।
तर, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण तिमिल्सिना नै दिउँसो टिपर चल्न नदिने पुरानो नीति भए पनि यातायात व्यवस्था विभागबाटै नयाँ निर्देशन आएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले बेलुका मात्र टिपर चलाउन दिने निर्णय गरेका थियौँ । तर, अहिले दिउँसो पनि चलाउन दिन काठमाडौंबाटै दबाब आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट पत्र नै आएको छ । निर्माणका काम रोकिए भनेर दिउँसो पनि टिपर चल्न दिनू भन्ने आदेश छ । व्यवस्थापनमा अलि गाह्रो भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
तर, इन्द्रावती नदीको बालुवा र ढुंगा ओसार्ने टिपर भने अरनिको राजमार्गभरि लस्करै पार्किङ गरेर राखिएका हुन्छन् । ‘पानी चुहाउँदै पिच भत्काउँछन्, बाटो छेक्छन्, जाम गर्छन्, यिनीहरूको गुनासो गरिसाध्य छैन,’ स्थानीय होटेल सञ्चालक रमेश श्रेष्ठले भने ।
काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रबाट दोलालघाटको बाटो हुँदै एक रातमा एक सय ५० भन्दा बढी टिपर गुड्छन् । पाँचखालसम्म पुग्दा अन्य क्षेत्रबाट समेत थपिएर टिपरको संख्या तीन सयभन्दा बढी हुन्छ । बनेपा, पनौतीलगायत क्षेत्रबाट समेत थपिएपछि एक रातमा करिब १५ सय टिपर सो क्षेत्रबाट उपत्यका छिर्छन् ।
काभ्रेका सिडिओ श्रवण तिमल्सिना भन्छन्–टिपर छाड्न काठमाडौंबाटै आदेश छ
हामीले बेलुका मात्र टिपर चलाउन दिने निर्णय गरेका थियौँ ।
तर, अहिले दिउँसो पनि चलाउन दिन काठमाडौंबाटै आदेश आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट पत्र नै आएको छ । निर्माणका काम रोकिए भनेर दिउँसो पनि टिपर चल्न दिनू भन्ने आदेश छ ।
व्यवस्थापनमा अलि गाह्रो भएको छ ।
त्रिवेणी क्रसरका सञ्चालक तथा भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल भन्छन्–मापदण्ड पुग्दैन, सहमतिमा गर्ने हो
गाउँपालिका र वडासँग समन्वय गरेर हामीले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हौँ ।
मापदण्ड त कतै पनि पुगेको छैन ।
स्थानीय तह र स्थानीयवासीकै सहमतिमा काम गर्ने हो ।
गाउँमा उद्योग–धन्दा आएपछि स्थानीय तहलाई कर जान्छ । स्थानीयवासीले पनि सहयोग पाउँछन् ।
त्यही भएर यो यति ठूलो विषय होइन ।
लकडाउनले वायुमण्डल सफा हुँदै छ : तर, स्थानीय तहले नदीको हुर्मत लिँदै छन्
लकडाउनले विश्व घरमै कैद भयो, अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । तर, लकडाउन विश्वभर पर्यावरणका लागि फाइदाजनक देखियो ।
सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना र प्रदूषण बढाउने अन्य गतिविधि ठप्प हुँदा वातावरणमा स्वच्छतामा आएको छ ।
वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा तोकिएको मापदण्डभन्दा पनि प्रदूषणको मात्रा निकै कम देखिएको छ ।
घर्तीलाई तातो बनाउने कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको छ ।
तर, हामीकहाँ विश्व वातावरण दिवसकै दिन पनि प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन रोकिएन् ।
५ जुन अर्थात् शुक्रबार विश्व वातावरण दिवस थियो ।
यसै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी महामारीबाट शिक्षा लिँदै वातावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व भएको बताएकी थिइन् ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा ट्विट गर्दै उनले मानिस, अन्य प्राणी र वनस्पतिको सुरक्षित भविष्यका लागि विकासका नाममा प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन रोक्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेकी थिइन् ।
सन्देश दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवास परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास परिसरमा शुक्रबार अपराह्न वृक्षरोपण गर्दै। सो अवसरमा वरपीपल एवं फलफूलका गरी करीब १५० बिरुवा रोपिएको जनाइएको छ । तस्वीर सौजन्य : राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइट
वरपीपल एवं फलफूलका गरी करिब एक सय ५० बिरुवा रोपिएको जनाइएको थियो ।
तर, यसै दिन काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सीमा छुट्याउने इन्द्रावती नदीमा धमाधम दोहन भइरहेको थियो ।
जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वको २५औँ स्थानमा र एसियामा ११औँ स्थानमा छ ।
जैविक विविधता हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । तर, प्राकृतिक सम्पदाको दोहनले जैविक विविधतामा ह्रास हुँदै छ ।
लकडाउनले काठमाडौं मात्र होइन, सधैँ प्रदूषणको चपेटामा पर्ने दिल्लीजस्तो सहरमा पनि वातावरणमा सुधार आयो ।
ग्रेटवालदेखि प्रायजसो प्रदूषित मानिने पेरिस पनि स्वच्छ भयो ।
महामारीले अहिले विश्वभर पर्यावरणमा सुधार आयो र भविष्यलाई पाठ पनि पढायो । तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिले सिकेनन् ।
त्यसैले त विश्व वातावरण दिवसकै दिन रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका—२ कलुवाघाटमा नक्कली बिल प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिएको समाचार आयो ।
र, चुरेको शिरबाट बग्ने बागमती, लखन्देही, कालिञ्जोर र फुलजोर नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी हुँदै आएको रिपोर्ट आयो ।
विश्ववातावरण दिवसको अवसरमा पोखरा महानगरपालिका–७ स्थित ड्याम साइडमा वृक्षरोपण गर्दै सुरक्षाकर्मी। तस्वीर : राधिका कँडेल/रासस
अहिले त्यस क्षेत्रमा दोहन तथा उत्खनन जारी नै छ । दिनहुँ धेरै संख्यामा टिपर तथा ट्र्याक्टरले ढुंगा, गिटी, बालुवा ओसारेका छन् ।
नगरपालिकाको दिएको ठेक्का भनेर ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ निकासी–पैठारी गरिरहेका छन् ।
प्रकृतिको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै अन्धाधुन्ध दोहनले पर्यावरण र विकासको सन्तुलनका लागि विश्वभर भइरहेका प्रयासमाथि पानी खन्याइदिएको छ ।
र, वातावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व भन्ने राष्ट्रपतिको भनाईलाईसमेत गिज्जाईरहेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि वातावरण संरक्षणलाई महत्व दिएको छ ।
तर, ठाँउठाँउमा जनप्रतिनिधि नै आफै यसको विरुद्ध देखिएका छन् ।
#प्रिन्टसंस्करण # प्राकृतिक सम्पदा # क्रसर तथा बालुवाखानी
देउवालाई दबाब दिन शेखर समुहको भेला आज पनि
नेप्से परिसूचक ८.८७ अंकले गिरावट
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच भेट
वर्षौंदेखि श्रीमतीमाथि श्रीमानकाे यौनहिंसा, सहन नसकेपछि बलात्कार मुद्दा
चालीस वर्ष पुगेका तर एक्लो जीवन बिताइरहेका महिलाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने
'हिँड्दा हिँड्दै हुने महिला हिंसालाई कम गर्ने प्रविधि आवश्यक छ'